TH - ไทยAR - العربيةEN - EnglishID - BahasaKH - CambodiaZH - 中文(简体)VN - Vietnam
အူမကြီး ရေကုထုံးသည် သင်၏အူမကြီးတွင် ရှိနေသော အဆိပ်အတောက်များ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်သွားရန် ကူညီသည့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်း၍ လွယ်ကူသော ဘဘာဝနည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ကုသချိန်တွင် ကျွန်ုပ်သည် မည်သည့်အရာများ မျှော်လင့်နိုင်သနည်း?
ဆရာဝန်နှင့် သင်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးနောက် သူနာပြုသည် သင့်အား အူမကြီး ရေကုထုံးကိရိယာအနီးရှိ သက်တောင့်သက်သာ ရှိသော အိပ်ယာထားရှိသည့် သီးသန့်အခန်းသို့ ခေါ်သွားမည်။ တစ်ခါသုံး ပလပ်စတစ်အိတ်ကို စအိုသို့ ညင်သာစွာ ထည့်မည်။ အသုံးပြုသည့်ရေသည် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် reverse osmosis ဖြင့် သန့်စင်ထားသည်။ မကြာသေးမီက အစားအသောက် စားသုံးခြင်း သို့မဟုတ် ရေသောက်ခြင်းသည် ကုသချိန်တွင် အဆင်မပြေမှု ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ကုထုံးမပြုလုပ်မီ သုံးနာရီမှ လေးနာရီကြိုတင်၍ အစားအသောက် စားသောက်ခြင်းမပြုရန် အကြံပေးသည်။
အူမကြီး ရေကုထုံးဆိုသည်မှာ ဘာလဲ?
အူမကြီး ရေကုထုံးသည် သင်၏အူမကြီးတွင် ရှိနေသော အဆိပ်အတောက်များ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်သွားရန် ကူညီသည့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်း၍ လွယ်ကူသော ဘဘာဝနည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အူမကြီး ရေကုထုံးသည် ရှေးအီဂျစ်ခေတ်ကတည်းက စတင်ခဲ့ပြီး နည်းပညာအဆင့်မြင့်လာသည်နှင့်အမျှ နည်းလမ်းသည်လည်း အဆင့်မြင့်လာသည်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းသော အတွင်းကလီစာသည် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို ပျက်ပြားစေနိုင်သည်။ အမှန်အားဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာရှိ ကိုယ်ခံစွမ်းအားဆဲလ်များ၏ ၇၀% ကို အတွင်းကလီစာတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဆိပ်အတောက်များ ထုတ်ပယ်ရန်၊ အတွင်းကလီစာများ ပုံမှန်ဟန်ချက်ညီအောင် ပြန်လည်ပြုလုပ်ပေးရန်ဖြစ်ပြီး အပြန်အလှန်အားဖြင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကောင်းမွန်လာစေသည်။
မည်သူသည် အူမကြီး ရေကုထုံးအတွက် သင့်လျော်သနည်း?
အူမကြီး ရေကုထုံးကို တတ်ကျွမ်းသောဆရာဝန်များ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် Esperance တွင် အပြီးအစီးလုပ်ဆောင်သည်။ ဆရာဝန်သည် သင်၏ကျန်းမာရေးရာဇဝင်ကို စုဆောင်းပြီး ကိုယ်ခန္ဓာစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ဆောင်မည်။ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် သင့်လျော်သည့် မျှော်လင့်ချက်များ သတ်မှတ်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အူမကြီး ရေကုထုံး (ဥပမာ အူသိမ်အူမရောင်ရမ်းရောဂါ၊ အချို့သောအသည်း သို့မဟုတ် ကျောက်ကပ်အခြေအနေ) အတွက် တားမြစ်ထားသည်ဟု ယူဆရသည့် ကျန်းမာရေးရာဇဝင်ရှိသောသူများအား အဆိပ်အတောက်ထုတ်ပယ်ခြင်းအတွက် အခြားရွေးချယ်စရာ ကမ်းလှမ်းသည်။
ပက်ကေ့တွင် ဆရာဝန်စမ်းသပ်ခနှင့် အူမကြီး ရေကုထုံးနည်းလမ်းပက်ကေ့ သတ်မှတ်အချိန်ကာလ ပါဝင်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကြိုတင်ရက်ချိန်း ရယူပါ။ ဖုန်း ၀၂-၀၁၁-၅၈၈၈ အီးမေး [email protected]
တစ်ရက်လျှင် ရေ တစ်လီတာသောက်၍ ကြိုတင်ပဋိဇီဝဆေးသောက်ခြင်းသည် ကုထုံးအတွက် အကောင်းဖက် အကျိုးသက်ရောက်မှု တိုးပွားစေပြီး အတွင်းကလီစာကျန်းမာရေးကို ဆက်လက်အထောက်အကူပြုသည်။